NGAPHANDLE kokuba zinganiki themba, izinto ezithethwayo ngemini yentshabalalo zivumelana kwizinto ezintathu. Eyokuqala, zonke zisekelwe kwiingcamango zabantu, bantu abo basoloko bengachani xa befunisela ikamva. Eyesibini, ukusinda kwabantu kungayinto yamabona-ndenzile, ukuba bakho abaza kukusinda. Eyesithathu, abasindileyo baya kuphila ubomi bentshontsho.
Ngokwahlukileyo kwezi zinto, iBhayibhile isinika ithemba elivakalayo ngekamva. Ithi kuza kubakho utshintsho olukhulu. Iqinisekisa ukuba baza kusinda nakanjani na abo benza ukuthanda kukaThixo. Ngapha koko, ayithi umhlaba uza kuqhushumbiswa okanye uza kuba ngumkhenkce ekungekho bani unokuphila kuwo. Ithi uza kulungiswa ube yiparadesi.
Abantu abaninzi abazikholelwa ezi ziprofeto. Abazikholelwa iimfundiso zeBhayibhile ezithetha ngembandezelo enkulu, iArmagedon, iwaka leminyaka, neParadesi. Ezi zinto zihlala zixutyushwa, kuphikiswana ngazo yaye bezama ukuzichaza abakwalizwi. Ngamnye uzichaza ngeyakhe indlela eyahlukileyo. Xa echaza ixesha lesiphelo, umbhali uBruce A. Robinson uthi: “Akukho mbandela uyindida nje ngalo kuleyo ikhe yabhalwa ngeenkolelo zobuKristu.” Ibe yintoni ke imiphumo? Ngumbhodamo wodwa.
Icacile kodwa yona into ethethwa ziZibhalo. IBhayibhile iqulethe isigidimi sikaThixo, yaye ufuna sikwazi oko kuza kwenzeka kwikamva. Cinga ngeminye imibuzo edla ngokuphakama, uze uve oko kuthethwa yiBhayibhile. Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi, unokuzicelela incwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova.
Ngaba umhlaba nabantu baya kutshatyalaliswa?
Ngaba bakho abantu abaza kufa?
“Abathe tye bona baya kuhlala emhlabeni, nabangenakusoleka baya kusala kuwo. Bona ke abangendawo, baya kunqunyulwa emhlabeni; ke wona amaqhophololo, aya kuncothulwa kuwo.”—IMizekeliso 2:21, 22.
Ngaba uThixo wakha wabohlwaya abangendawo ngaphambili?
UThixo zange ayeke ukohlwaya “ihlabathi lamandulo, kodwa wagcina uNowa, umshumayeli wobulungisa ekhuselekile kunye nabanye abasixhenxe xa wazisa unogumbe phezu kwehlabathi labantu abangenabuthixo; yaye wazigwebela isohlwayo izixeko iSodom neGomora ngokuthi azifinyeze zibe luthuthu, emisela abantu abangenabuthixo umzekelo wezinto eziza kuza.”—2 Petros 2:5, 6.
Ngaba sinokuwazi umhla aza kugweba ngawo uThixo?
“Akukho bani uwaziyo loo mhla nelo lixa, azazi neengelosi zamazulu engazi noNyana, kodwa nguBawo kuphela. Kuba kanye njengokuba yayinjalo imihla kaNowa, buya kuba njalo ubukho boNyana womntu. Kuba njengokuba babenjalo ngaloo mihla yangaphambi komkhukula, besidla, besela, amadoda etshata namabhinqa etshatiswa, de kwaba yimini awangena ngayo uNowa emkhombeni; kwaye abazange banikele ngqalelo de wafika umkhukula waza wabatshayela bonke, nobukho boNyana womntu buya kuba njalo.”—Mateyu 24:36-39.
Ngaba ikho into ebonisa ukuba isiphelo sesiza kufika?
“Ngemihla yokugqibela kuya kufika amaxesha amanqam ekunzima ukujamelana nawo. Kuba abantu baya kuba ngabazithandayo, abathandi bemali, abazidlayo, abanekratshi, abanyelisi, abangathobeli bazali, abangenambulelo, abanganyanisekanga, abangenawo umsa wemvelo, abangayifuni kwaphela imvisiswano, abanyelisi, abangenakuzeyisa, iindlobongela, abangathandi kulunga, abangcatshi, abaneentloko ezilukhuni, abakhukhumele likratshi, abathandi beziyolo kunokuba bathande uThixo, benembonakalo yozinikelo lobuthixo kodwa bengaphili ngokuvisisana nalo.”—2 Timoti 3:1-5.
Ikamva libaphathele ntoni abantu emhlabeni?
UThixo “uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo, kungabi sabakho kufa, kungabi sabakho kuzila nakukhala nantlungu kwakhona. Izinto zangaphambili zidlule.”—ISityhilelo 21:4.
UThixo “uya kuzisula zonke iinyembezi emehlweni abo”
Nakuba iZibhalo zingasixeleli yonke into eza kwenzeka kwikamva, ziyasiqinisekisa ukuba abantu baza kufumana ikamva. Asinakukwazi nokuzithelekelela iintsikelelo esiza kuziphathelwa likamva. Unokuqiniseka ukuba oku kuyinyaniso kuba oko uYehova uThixo akuthembisayo uyakwazi ukukuzalisekisa.